audio - Synonyms of audio | Antonyms of audio | Definition of audio | Example of audio | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for audio
Top 30 analogous words or synonyms for audio
အမ်ပီသရီး သို့ဖြစ်၍ ဗီဒီယိုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အရွယ်ချုံ့ရန် MPEG မှ နည်းလမ်းများ တီထွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ချုံ့ရာတွင် တေးသီချင်းများ၊ ဒီဗီဒီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ၊ HDTV ထုတ်လွှင့် ချက်များနှင့် ဒီအက်စ်အက်စ် ဂြိုဟ်တု စနစ်များလည်းပါဝင်သည်။ ချုံ့ထားသော တေးဂီတဖိုင်များကိုလည်း MPEG Audio Layer-3 ဟု ခေါ်ကြ၍ ယခု ကျွန်တော်တို့ သိထားကြသည့် အမ်ပီသရီး ဖိုင်များဖြစ်သည်။
လိုအပ်လျင် ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ရုပ်သံ လိုအပ်လျင် ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဗွီဒီယို( Video on Demand (VOD)) သို့ လိုအပ်လျင် ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ရုပ် နှင့် အသံ (Audio and Video on Demand (AVOD))၊ လူအများ ကြည့်ရှုနားဆင်လိုသော အချိန်တွင် ကြိုက်ရာ ရုပ်သံများကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ အိုင်ပီတီဗွီ နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက် နှင့် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများဆီသို့ တိုက်ရိုက် ချိတ်သွယ်ပေးထားသည်။
Drone metal Drone metal သည် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်၊ ဆီအက်တယ်မြို့မှ Earth အုပ်စုမှ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Earth သည် Melvins တီးဝိုင်းမှ sludge metal နှင့် La Monte Young ၏ minimalist ဂီတမှ စိတ်ကူးညဏ်များကို ယူခဲ့သည်။ အခြားအုပ်စုမှာ Burning Witch ဖြစ်ပြီး Earth တည်ထောင်ပြီး ငါးနှစ်အကြာတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Seattle မှဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျမဟုတ်သော အဆိုပုံစံနှင့် audio-feedback တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထိုအုပ်စုသည် အရေးပါသော powerviolence (hardcore punk ၏အမျိုးအစား) ကို label Slap-a-Ham တွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့
Drone metal ပုံမှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်ဂစ်တာကို ကြီးမားသော reverb နှင့် audio feedbackများနှင့် အဆိုမှာ မာန်ဖီသံ(သို့) စူးရှသောအသံများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြသည်။ သီချင်းများမှာ lack beat (သို့) rhythm in the traditional sense နှင့် အရည်အသွေးမှာ ကြာမြင့်သည်။ အမေရိကန် drone metal သည် sound sculpture နှင့်အတူ drone metal တီးထွင်သည့် တီးဝိုင်းဟု ဖော်ပြခံရသည်။ Jan Tumlir က infra-sound rumble of sub-bass ကိုအကျိုးပြုပါတယ်။ ဒါကို brown noise ဟုခေါ်ပါသည်။
အယ်လ် ဝယ်လိဒ်ဘင် တယ်လယ် သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် .. Kingdom Holding Company တွင် ရှယ်ယာ ၉၅%၊ Rotana Video & Audio Visual Company တွင် ၉၁% ပိုင်ဆိုင်မှု၊ Lebanese Broadcasting Center ( LBCSAT ) တွင် ၉၀% ပိုင်ဆိုင်မှု၊ News Corp (Fox News) တွင် ၇%၊ Citigroup တွင် ၆%၊ လက်ဘနွန် ရှိ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာနှစ်စောင်ဖြစ်သော Al Nahar နှင့် Al Diyar တွင် ၁၇% နှင့် ၂၅% တို့လဲပါဝင်ပိုင်ဆိုင်သည်။
အပိုလို ၁၁ From July 16–24, 2009 NASA streamed the original mission audio on its website in real time 40 years to the minute after the events occurred. In addition, it is in the process of restoring the video footage and has releasedapreview of key moments.
အိုင်းပက် ၂ (ကွန်ပျူတာ) အိုင်းပက် ၂ (iPad 2) သည် အက်ပဲလ် (Apple) မှ တီထွင်ရောင်းချသည့် tablet ကွန်ပျူတာ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အိုင်းပက် (iPad) ၏ ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် အီးဘွတ်ခ် (e-book)၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာများ ဖတ်ရှုရန်၊ ရုပ်ရှင် ကြည့်ရန်၊ တေးဂီတနားထောင်ရန်၊ ဂိမ်းကစားရန် စသည့် ရုပ်သံ မီဒီယာ (audio-visual media) အတွက် တီထွင်ထားသည့် platform ဖြစ်သည်။ ၁၀ နာရီကြာခံသည့် ဘက်ထရီပါရှိပြီး video calling အတွက် မျက်နှာပြင် နှစ်ဘက်စလုံးတွင် ကင်မရာတပ်ဆင် ထားသည်။